Umhlahlandlela Osheshayo Wokudala Imithetho Yenqola Yokuthenga ku-Adobe Commerce (Magento) | Martech Zone
Ukudala ukuzizwisa kokuthenga okungenakuqhathaniswa kuwumgomo oyinhloko wanoma yimuphi umnikazi webhizinisi le-ecommerce. Ekuphishekeleni ukugeleza okuqhubekayo kwamakhasimende, abathengisi bathula izinzuzo zokuthenga ezihlukahlukene, njengezaphulelo namaphromoshini, ukuze benze ukuthenga kwanelise nakakhulu. Enye yezindlela ezingenzeka zokufeza lokhu ngokudala imithetho yenqola yokuthenga.
Sihlanganise umhlahlandlela wokudala ukuthenga imithetho yenqola in I-Adobe Commerce (ngaphambilini eyayaziwa ngokuthi i-Magento) ukuze ikusize wenze isistimu yakho yesaphulelo isebenze kalula.
Iyini Imithetho Yenqola Yokuthenga?
Imithetho yentengo yenqola yokuthenga iyimithetho yokuphatha ephathelene nezaphulelo. Angasetshenziswa ngemva kokufaka ikhodi yekhuphoni/yephromo. Isivakashi sewebhusayithi ye-ecommerce sizobona Faka isicelo sekhuphoni inkinobho ngemva kokwengeza imikhiqizo ekalishini lokuthenga kanye nenani lesaphulelo ngaphansi kwebha yenani lenani eliphansi.
Ukudala noma ukuhlela imithetho yentengo yenqola yokuthenga nge-Magento kulula kakhulu, uma wazi ukuthi kufanele uye kuphi kuqala.
Ngemva kokungena kudeshibhodi yakho yomqondisi, thola ifayela le Marketing ibha kumenyu eqondile.
Ekhoneni eliphezulu kwesokunxele, uzobona Amaphromoshini iyunithi, ikhathalogi ehlanganisa nemithetho yentengo yenqola. Hamba ngeyokugcina.
Engeza Umthetho Omusha Wenqola
Thepha Engeza Umthetho Omusha inkinobho futhi ulungele ukugcwalisa ulwazi lwesaphulelo oluyisisekelo emikhakheni embalwa:
Phatha Amakhodi Wekhuphoni.
Ukugcwalisa Ulwazi Lomthetho
Lapha uzogcwalisa inombolo yamabha wokubhala.
Qala nge Igama Lokubusa bese wengeza incazelo emfushane ngayo. I Incazelo inkambu izobonakala ekhasini le-Admin kuphela ukuthi ungahlukumezi amakhasimende anemininingwane eyeqile futhi uzigcinele yona.
Nika amandla umthetho wentengo yenqola ngokuthepha iswishi engezansi.
Esigabeni Sewebhusayithi, kufanele ufake iwebhusayithi lapho umthetho omusha uzosebenza khona.
Bese uhamba ukukhethwa kwe Amaqembu Abathengi, kufanelekile ukuthola isaphulelo. Khumbula ukuthi ungakwazi ukunamathisela kalula iqembu lamakhasimende elisha uma ungayitholi inketho efanelekile kumenyu yokudonsela phansi.
Ukuqedela isigaba sekhuphoni
Ngenkathi udala imithetho yenqola yokuthenga e-Magento, ungaya Alikho Ikhuphoni inketho noma khetha a Ikhuphoni Specific ukusetha.
Gcwalisa Isetshenziswa ngeKhasimende ngalinye field, echaza ukuthi umthengi ofanayo angasebenzisa kangaki umthetho.
Khetha amadethi okuqala nawokuphelelwa yisikhathi ukuze umthetho ukhawulele isikhathi sokutholakala kwethegi yenani eliphansi
Faka ikhodi yekhuphoni.
Faka izibalo ze Isebenzisa Ikhuphoni Ngalinye futhi / noma Isetshenziswa Ikhasimende Ngalinye ukuqinisekisa ukuthi umthetho awusetshenziswa ngokweqile.
Elinye iphuzu okufanele ulinake inketho yekhuphoni yesizukulwane esizenzakalelayo, okwenza kube nokwenzeka ukudala amakhodi ekhuphoni ahlukahlukene ngemuva kokugcwalisa ingxenye eyengeziwe Phatha Amakhodi Wekhuphoni kuchazwe ngezansi.
Ukusetha Imibandela Yomthetho
Esigabeni esilandelayo, kufanele usethe izimo eziyisisekelo lapho umthetho uzosetshenziswa khona. Uma ufuna ukusetha izimo ezithile zenqola yokuthenga, ungahlela Uma zonke lezi zimo ziyiqiniso umusho ngokukhetha ezinye izinketho kune konke futhi / noma weqiniso.
Chofoza Khetha umbandela ukuze wengeze ithebhu ukuze ubone imenyu yezitatimende ezidonsela phansi. Uma kwenzeka isitatimende sesimo esisodwa singanele, zizwe ukhululekile ukungeza eziningi ozidingayo. Uma umthetho kufanele usetshenziswe kuyo yonke imikhiqizo, vele weqe isinyathelo.
Ukuchaza Izenzo Zomthetho Wenqola Yokuthenga
Ngezenzo, imithetho yenqola yokuthenga ku-Magento isho uhlobo lwezibalo zesaphulelo. Isibonelo, ungakhetha phakathi Kwamaphesenti esaphulelo somkhiqizo, Isaphulelo senani Eligxilile, Isaphulelo senani elingashintshi layo yonke ikalishi, noma Thenga okuthi X uthole okuhlukile kuka-Y.
Khetha inketho efanelekile ku- Faka isicelo ithebhu yemenyu yokudonsela phansi bese ufaka inani lesaphulelo kanye nenani lemikhiqizo umthengi okufanele ayifake enqoleni ukuze asebenzise umthetho wentengo yenqola.
Iswishi elandelayo inganika amandla ukungeza isaphulelo kungqikithi encane noma enanini lokuthumela.
Kusele ezinye izinkambu ezimbili.
The Lahla imithetho elandelayo kusho ukuthi eminye imithetho enamanani amancane esaphulelo izosetshenziswa noma ngeke isetshenziswe ezinqoleni zabathengi.
Ekugcineni, ungakwazi ukugcwalisa Izimo ithebhu ngokuchaza imikhiqizo ethile esebenza esaphulelo noma uyishiye ivulekile kukhathalogi yonke.
Ilebula Imithetho Yenqola Yokuthenga
Setha Bhala uma uphatha isitolo sezilimi eziningi.
The Bhala Isigaba sibalulekile kulabo abasebenzisa isitolo se-ecommerce sezilimi eziningi njengoba sivumela ukuveza umbhalo welebula ngezilimi ezahlukene. Uma isitolo sakho sinolimi olulodwa noma ungafuni ukuzihlupha ngokufaka imibhalo yelebula ehlukene yokubuka ngakunye, kufanele ukhethe ukubonisa ilebula ezenzakalelayo.
Kodwa ukusebenzisa ulimi olulodwa kuwubugebengu bangempela, okukhawulela ububanzi beklayenti nokunciphisa izinga lokuthenga kwabo ku-inthanethi. Ngakho-ke uma i-ecommerce yakho ingakalungi ulimi okwamanje, thatha isikhathi sakho ukwenza izichibiyelo. Bese udala ilebula yomthetho njengereferensi yokuhumusha.
Mayelana Nokuphatha Amakhodi Ekhuphoni
Uma unquma ukunika amandla ukukhiqiza okuzenzakalelayo kwekhodi yekhuphoni, kuzodingeka ungeze eminye imininingwane eqondile yekhuphoni kulesi sigaba. Faka ubuningi bekhuphoni, ubude, ifomethi, iziqalo/izijobelelo zekhodi, namadeshi kumathebhu afanelekile bese ucindezela u- Londoloza umthetho inkinobho.
Siyakuhalalisela, usuqedile ngomsebenzi.
ICEBISO: Uma usudale umthetho wenqola eyodwa, kungenzeka udale ezinye ezimbalwa ukuze wenze izaphulelo zakho zibe ngezomuntu siqu nakakhulu. Ukuze ukwazi ukuzulazula kuzo, ungahlunga imithetho ngamakholomu, uyihlele, noma umane ubheke imininingwane yomthetho.
Imithetho yenqola yokuthenga ingenye ye-Adobe Commerce Izici ze-Magento 2 lokho kuzokusiza ukuthi udale izinzuzo zamakhasimende akho kalula ngaphandle kokubhala umugqa wekhodi. Ngokulandela izinyathelo ezichazwe ngenhla, uzokwazi ukwenza isitolo sakho se-ecommerce silingane kangcono nezimfuno zamakhasimende ezihlala zikhuphuka, uhehe amakhasimende amasha ngokusabalalisa amakhodi ekhuphoni phakathi kwabathonya be-niche futhi uthuthukise isu lakho lokumaketha elijwayelekile.
Tags: i-adobe commerceifu le-adobe commerceI-adobe Commerce couponIzenzo ze-adobe commerce coupon ruleimithetho yekhuphoni ye-adobe commerceIzenzo zomthetho wentengo yenqola yokuthenga ye-adobeimithetho yentengo yenqola yokuthenga ye-adobesebenzisa isigqebhezanaimithetho yentengo yenqolaindlelaimithetho yenqola yokuthenga ye-magentaMagentomagento 2 iziciisigqebhezana se-magentoizenzo zomthetho wekhuphoni we-magentoizimo zokubusa kwekhuphoni ye-magentoimithetho yekhuphoni ye-magentoukuphatha i-adobe commerce coupon coldesimithetho yenqola yokuthenga